पूर्वाधार Archives - Chanakya Post
राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गको ९५ प्रतिशत काम पूरा, माघसम्म सकिने
कास्की । राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको कास्की पश्चिम खण्डअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका–२५ याम्दीदेखि घट्टेखोलासम्मको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गसमेत पर्ने सो खण्डको १२ किमी सडक निर्माण कार्य ९५ प्रतिशत सकिएको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) सडक आयोजनाले जनाएको छ । ढिलोमा आगामी माघ महिनाभित्रमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने दावी गरिएको छ । […]
काठमाडौं । नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणले गति लिने भएको छ । विगतमा यहाँका संरचना हटाउन लामो समय लागेकाले प्रगति न्यून देखिए थियो । अहिले ती संरचना हटिसकेकाले कामले गति लिने जनाइएको छ । अहिलेसम्म जम्मा आठ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको आयोजनामा अबको ६ महिनामा ३० प्रतिशत प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ । काम नियमित हुँदा […]
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण ५ दिन ठप्प हुने, दशैंपछि मासिक ३५० मिटर खन्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण दशैँमा ५ दिनका लागि बन्द हुने भएको छ । असोज २६ गते फूलपातीका दिनदेखि ३० गते टीकाको दिनसम्म बन्द हुने भएको हो । आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यका अनुसार ५ दिन जनशक्तिहरुलाई दशैं बिदा दिइएकाले काम बन्द हुने भएको हो । असोज ३१ गतेदेखि पुनः काम सुरु हुने उनले जानकारी […]
बन्दीपुर केबलकार डेढ वर्ष भित्र संचालनमा आउने, स्थानीयले १० हजारमा १० वर्ष चढ्न पाउने
दमौली । तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा निर्माणाधीन बन्दीपुर केबलकार परियोजना दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । २०७५ साउन पहिलो साता शिलान्यास भई २०७७ फागुन १ गते केबलकार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइए पनि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण उक्त परियोजना दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको हो । २०७६ चैत दोस्रो सातादेखि कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भएपछि […]
३ महिनापछि बल्ल खुल्यो मनाङ पुग्ने सडक
मनाङ । यस वर्षको वर्षायामको सुरुदेखि अवरुद्ध सडक ३ महिनापछि सञ्चालन भएपछि मनाङको जनजीवन सहज बन्दैछ । विगत ३ महिनादेखि अवरुद्ध बेँसीशहर–चामे सडकखण्डको धारापानी माथिसम्म सडक पुगेपछि औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आएको छ । लामो समयदेखि सडक सञ्जालबाट टाढा रहेका मनाङवासीलाई सडक सञ्चालनमा आएपछि सहज भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बताए। धारापानीबाट माथिल्लो ५ किलोमिटर बाँकी […]
१ दर्जन सडकका अवरोध हटाइए, कुन-कुन सडक पूर्ण रूपमा खुले ?
काठमाडौं । दशैं नजिकिएसँगै सरकारले सोमबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइसकेको छ । केही मानिसहरूले घर जान टिकट समेत काटिसकेका छन् । तर, लाखौँ मानिसहरू यात्रा गर्ने देशका विभिन्न राजमार्गको अवस्थाले भने उनीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । मध्यअसोज भइसक्दा पनि मनसुन सक्रिय छ । देशभरका साना–ठूला गरी धेरै सडकखण्डहरू अवरुद्ध पनि छन् । सडक अवरुद्ध […]
वर्षा नहटी मुख्य सडकका खाल्टाखुल्टी नपुरिने
काठमाडौं । वर्षा नरोकिँदा खाल्डा परेका सडकको मर्मत सुरु हुन सकेको छैन । समयमा मर्मत नहुँदा देशभरका धेरै राष्ट्रिय राजमार्गमा खाल्टाखुल्टी परेका छन् । अझै केही दिनसम्म वर्षा जारी रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान छ । त्यसैले तत्काल खाल्डा पुर्ने काम अघि नबढाइएको हो । खाल्डामा पानी हुने र पानी जम्दा त्यसको […]
‘रफ्तार’मा अघि बढ्दै नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण, अहिलेसम्म कति खनियो ?
काठमाडौं । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । तोकिएको समयवधि भन्दा अगाडि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कामको तीव्रता दिइएको आयोजनाले बताएको छ । नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गका आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले यसअघि दैनिक ६ मिटर खन्ने गरिएकोमा हाल गति बढाएर १० मिटरको दरले खन्न थालिएको बताए । ‘यसअघि मासिक २०० मिटर […]